तत्कालका लागि नेपालमा सलहको जोखिम टर्‍यो ! सलहको ठूलो झुण्ड राजस्थानमा पुगेपछि तितरबितर – Janapriyakhabar
तत्कालका लागि नेपालमा सलहको जोखिम टर्‍यो ! सलहको ठूलो झुण्ड राजस्थानमा पुगेपछि तितरबितर
सलह किराको प्रवेश र रोकथामबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक समितिले तत्कालका लागि नेपालमा सलहको जोखिम टरेको निष्कर्ष निकालेको छ। कृषि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तान हुँदै भारत प्रवेश गरेको सलहको ठूलो झुण्ड राजस्थानमा पुगेपछि तितरबितर भएको छ ।
हावाको बहावभन्दा फरक दिशामा सलह उड्न नसक्ने भएकाले पनि सलह प्रवेशको सम्भावना कम भएको हुमागाइँले बताए । झण्डै एक साता लामो अध्ययनमा तत्कालका लागि जोखिम टरे पनि विगतमा सलहले ठूलो क्षति निम्त्याएकाले सर्तकता अपनाउन समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।